လန်ဒန်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့အထင်ရှားဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုအကြောင်းမေးခဲ့တယ် - သတင်း
Tab သည်လူတို့၏ထူးဆန်းဆန်းပြားဆုံးနှင့်အများဆုံးထူးဆန်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများကိုရှာဖွေရန်လန်ဒန်ရှိလမ်းများပေါ်တွင်ထိမှန်ခဲ့သည်။ သောင်းကျန်းသူသုံး ဦး မှစ။ အေးခဲနေသောကလေးငယ်များမှသည်သင်ညစ်ညမ်းသောဘဂ်ဂါများ၊ မင်းအတွက်ထူးဆန်းဆန်းပြားဆုံးနှင့်အရှက်ရဆုံးအဖြစ်အပျက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းထဲထည့်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ရန်အများပြည်သူထံလည်းကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နိုင်ခဲ့သည်။
Pete: လယ်ထွန်စက်တစ် ဦး အပေါ်သူ၏အပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်
Pete - ငါလယ်ထွန်စက်ပေါ်မှာငါ့အပျိုစင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဒါဟာငါ့အဆွေခင်ပွန်းရဲ့မွေးနေ့ပါတီဖြစ်ပြီးလာမယ့်လယ်ပြင်၌ရှိ၏။ ထိုညတွင်ကပ္ပတိန်သည်ထွန်းလင်းခဲ့သည်။
ဂျေး - အမျိုးသားသွေးထွက်သံယိုရတနာ
ဂျေး - ငါဆယ့်ကိုးနှစ်ရှိပြီ၊ နယူးကာဆယ်မှာတစ်ညသွားမယ်။ အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီစကော့တလန်အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူမကတစ်ညလုံးအလေးအိတ်တစ်လုံးကိုသူမနဲ့အမြဲတွေ့ခဲ့တယ်။ ညဥ့်နက်ပိုင်း၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသင်သိသည်။ သင်သည်ကိုးနှစ်ရှိသည့်မိန်းကလေးများနှင့်အမြဲတမ်းအိမ်တစ်အိမ်နှင့်အတူအိမ်ကိုသွားနေသည်။ ဒါနဲ့စကော့တလန်အမျိုးသမီးဟောင်းနဲ့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေကသူမကိုရိုက်နှက်လိုက်တာကရယ်စရာဖြစ်လို့ပဲ။ ဤသည်အခြားမိန်းကလေးပဲတက္ကစီ၌ရရှိသွားတဲ့ရဲ့သူမ၏မြေးရဲ့ထွက်လှည့်။
ငါတို့သုံးယောက်, ဒီဂေါက်သီးကလပ်ကိုသွားနဲ့ကျွန်မအပေါ် clocked ဘူး။ ငါပဲမိခင် shag သွားမယ်ထင်ခဲ့တယ်။ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတိုကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဲ့ဒီ့ညမှာကျွန်တော်လောင်းကစားရုံကိုရောက်ခဲ့တုန်းကပေါင် ၂၅၀ ရခဲ့ပြီးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ပိုက်ဆံလည်းမရှိတော့ဘူး။ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ငွေစက္ကူ ၅၀ ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့လိုက်တယ်။ ငါ့ဥစ္စာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ငါပိုက်ဆံအားလုံးကိုယူပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါပဲ
အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း, သူမသွားလေ၏မှတဆင့်တစ်ဝက်ငါဒီ dooen တယ်ယုံကြည် cannae !!
Clive - ကံမကောင်းတာကကျွန်ုပ်အသက် ၅၇ နှစ်ရှိပြီ။ ဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်မှာလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကထူးဆန်းပြီးထူးဆန်းတယ်။ ငါဆေးပညာကိုလေ့လာခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါပြောနိုင်တာကတော့တခြားသူတွေရဲ့အောက်ခြေကနေငါဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အရာအရေအတွက်။ ဒါဟာငါကလူရဲ့အောက်ခြေအမှုအရာတက်ချပြီးခံစားရန်စတင်တစ်ချိန်တည်းအကြောင်းကိုပဲ! ငါလုံလောက်ပြီထင်တယ်
အာရုန် - မှားယွင်းတဲ့သက်သေခံအထောက်အထားများ
အာရုန် - ကျွန်ုပ်သည်ယူအက်စ်ရှိ Washingon St. Louis ရှိတက္ကသိုလ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါဒုတိယနှစ်၌, ငါ့ရည်းစားအခြားမိန်းကလေးနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာအခန်းဖော်တွေဖြစ်ကြတာကြောင့်သူတို့ဟာအခန်းတစ်ခန်းတည်းမှာပဲနေခဲ့ကြတာပါ။ ငါအရမ်းမူးနေတဲ့သူတို့ရဲ့အခန်းထဲကိုမှားသွားပြီးအိပ်ရာမှားယွင်းသွားပြီးသူမရဲ့အခန်းဖော်ကိုပစ္စည်းပစ္စယများစတင်လုပ်ခြင်းကသူမမဟုတ်မှန်းသိနေတယ်။
ငါရည်းစားရှိခဲ့သူသူမ၏အခန်းဖော်ကထင်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ် သူမ ရည်းစားဒါငါကျနော်တို့သူမ၏လှည့်ပတ်လှိမ့်ခြင်းနှင့်သူမကိုကြည့်ခဲ့သည်အထိသူမမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းငါ့ကိုရုတ်တရက်အားလုံးသည်အထိကောင်းသောအဆယ်မိနစ်ဆယ်ငါးမိနစ်အဘို့ဤအမှုကိုပြုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော့်ရည်းစားကနောက်တစ်နေ့မနက်မှာတွေ့ပြီးရယ်လိုက်သည်။
မင်္ဂလာပါ - အခြေခံအားဖြင့်၊ ငါနဲ့ငါ့ရည်းစားကညစာစားဖို့မိဘတွေအိမ်ကိုသွားလည်ကြတယ်။
ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြတာပါ၊ အဲဒီနောက်ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကကျွန်မတို့ကိုထွက်တွေ့ပြီးတွေ့ခဲ့တယ်။ သူတို့ကရယ်ပြီးမင်းကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်။ သို့သော်ဆောင်းရာသီတွင်အေးခဲ။ အေးခဲ။ အဆုံးမှထွက်ရန်အလွန်ခက်ခဲပြီးအလွန်အဆင်မပြေခဲ့ပါ။
Greg - ငါတစ်ကြိမ်မှာ Montana ကိုရထားပေါ်မှာရောက်နေတုန်းကကျွန်မရဲ့ရည်းစားဆီက blowjob ရခဲ့တယ်၊ ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်၊ ညအချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမင်းရဲ့မိန်းကလေးကမင်းရဲ့ crotch မှာအိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ထင်ရသလိုမျိုး။ ငါအရမ်းအဆင်ပြေပုံရတယ်ထင်တယ်၊ မင်းသူ့ကိုနိုးပြီးသူ့ကိုနည်းနည်းရွှေ့သင့်တယ်ထင်တယ်၊
ငါ့လိင်တံကိုငါ့အဘိုးလို့ခေါ်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါ့ဆီပြန်လာစေချင်ရင်ကျွန်မရဲ့အဘိုးနဲ့တွေ့ဆုံချင်သလားလို့သူတို့ကိုအမြဲမေးတယ်။ သူတို့ကဟုတ်တယ်လို့အမြဲပြောတယ်
Carla - တစ်နေ့တာမှာဂေါက်ကွင်းမှာကျွန်တော်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ဂေါက်သီးရိုက်နေတဲ့လူဟောင်းတွေကငါတို့ကိုငေးကြည့်နေတဲ့အချိန်အထိဒီဟာကအချည်းနှီးပဲပန်းခြံလို့ထင်ခဲ့တယ်။
သူတို့ကစာသားဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ အဲဒီမှာပဲရပ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်၊ အဝတ်အစားတွေကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးအဝတ်အချည်းစည်းတွေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။
ဒီ nutter ကြည့်ပါ
သူ Mike - ငါတက္ကသိုလ်မှယောက်ျားလေးများနှင့်အတူတောင်အမေရိကသို့လှည့်လည်ခဲ့သည်။ ဒီမိန်းကလေးကိုကျွန်မတို့ရဲ့ဘော်ဒါဆောင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလူ ၁၂ ယောက်ရဲ့အခန်းထိပ်မှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။
က Parker - ၎င်းသည် Frosh ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပြီးကနေဒါတွင်လတ်ဆတ်သောအနာများနှင့်တူ၏။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများနှင့်အတူပန်းခြံတစ်ခုတွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ တစ်နေ့တာအတွင်း! လူတွေအလုပ်လုပ်ဖို့သွားတဲ့အချိန်မနက်မှာပဲ။
စတိဗ် - ငါသာအခြားရက်သတ္တပတ်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုသတ်ဖြတ်ရန်နီးကပ်လာပုံကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်နေတာပဲငါယောက်ျားလေးတွေအတွက်သူ့ကိုသတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။
ငါ flan ကြိုက်တတ်တဲ့
ကြက် piss Partridge
Craigslist အပေါ် adderall ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို